Igqirha leNtombi yaseBrithani enkulu
Imihla: Juni 9, 1836 - Disemba 17, 1917
Yaziwa ngokuba: ibhinqa lokuqala ukugqiba ngokuphumelelayo iimviwo ezifanelekileyo zempilo e-Great Britain; Umgqirha wokuqala wokuqala waseBrithani; ukukhuthaza abafazi kunye namathuba amabhinqa kwimfundo ephakamileyo; Ibhinqa lokuqala eNgilani lonyulwe njengamagosa
Yaziwa nangokuthi: Elizabeth Garrett
Udade waseMillicent Garrett Fawcett , waseBrithani eyaziwa ngokuba ngumgaqo-siseko "wakhe ngokomgaqo-siseko" ngokuchasene ne-radicalism ye-Pankhursts; Kwakhona umhlobo kaEmily Davies
Mayelana noElizabethe Garrett Anderson:
U-Elizabeth Garrett Anderson wayengomnye wabantwana abalishumi. Uyise wayenomntu oshishino olukhululekile kunye nezopolitiko.
Ngowe-1859, u-Elizabeth Garrett Anderson weva intetho kaElber Black Black "kwiMicrothelo njengoBuchule bamaLadies." Emva kokuba anqobe inkcaso kayise aze athole inkxaso, wangena kwi-medical training - njengomongikazi. Wayenguye kuphela umfazi eklasini, kwaye wayevinjelwe ukuthatha inxaxheba ngokupheleleyo kwigumbi lokusebenza. Xa ephuma kuqala kwiimviwo, abanye abafundi babeye bavinjelwa kwiintetho.
U-Elizabeth Garrett Anderson wabe esetyenziselwa, kodwa wafunyanwa yizona zikolo ezininzi zonyango. Ekugqibeleni wangeniswa-ngeli xesha, ukufundisisa ngasese kwilayisenisi ye-apothecary. Kwafuneka alwe namaqela ambalwa okulwa ukuba avunyelwe ukuba athathe uviwo kwaye athole ilayisenisi. Ukuphendula koMbutho weeNgcaciso kwakukuchibiyela imimiselo yabo ukuze kungabikho abafazi abanokufumana ilayisenisi.
Ngoku u-Elizabeth Garrett Anderson uvula i-dispensary eLondon yabasetyhini nabantwana ngo-1866. Ngowe-1872 yaba yiSibhedlele esitsha saBafazi nabantwana, isibhedlele kuphela sokufundisa eBrithani ukubonelela izifundo kubafazi.
U-Elizabeth Garrett Anderson wafunda isiFrentshi ukuze afake isicelo se-degree degree kwi-faculty yase-Sorbonne, eParis.
Wanikwa loo nqanaba ngo-1870. Waba ngumfazi wokuqala eBrithani ukuba aqeshwe kwithuba lokunyanga kwonyango ngaloo nyaka.
Kwakhona ngo-1870, u-Elizabeth Garrett Anderson kunye nomhlobo wakhe uEmily Davies bobabini babema ukhetho kwiBhodi yeZikolo zaseLondon, i-ofisi esanda kuvulelwa kubafazi. U-Anderson wayeyivoti ephakamileyo phakathi kwabo bonke abaviwa.
Watshata ngo-1871. UJacob Skelton Anderson wayengumrhwebi, kwaye babenabantwana ababini.
U-Elizabeth Garrett Anderson wayexinzelele kwimpikiswano yezokwelapha kwiminyaka ye-1870. Wayechasene nalabo ababethi imfundo ephakamileyo ibangele ukusebenza ngokugqithiseleyo kwaye ngaloo ndlela yanciphisa amandla okuzala abesetyhini, kwaye ukuba ukuhamba kwakhe kwenza ukuba abafazi babe buthathaka kwimfundo ephakamileyo. Kunoko, u-Anderson wathi ukunyanzelisa umzimba kwakulungele imizimba yabasetyhini kunye nengqondo.
Ngowe-1873, iBritish Medical Association yavuma uAnderson, apho yayingowona kuphela ilungu lomfazi iminyaka engama-19.
Ngo-1874, u-Elizabeth Garrett Anderson waba ngumfundisi kwi-London School for Medicine for Women, eyasungulwa nguSophia Jex-Blake. U-Anderson wahlala efana nomfundisi wesikolo ukususela ngo-1883 ukuya ku-1903.
Ngomnyaka we-1893, u-Anderson wancedisa ekusekeni kwe-Johns Hopkins Medical School, kunye nabanye abaninzi kuquka uMark Carey Thomas .
Abafazi banikela ngemali yeziko lezonyango kwimeko yokuba isikolo samkela abafazi.
U-Elizabeth Garrett Anderson wayesebenzela inxaxheba kwintliziyo yabasetyhini. Ngomnyaka we-1866, u-Anderson noDavies banikezela izikhalazo ezitywinwe ngama-1,500 abacela ukuba iintloko zezindlu zintombi zinike ivoti. Wayengabonakali njengoodadewabo, uMillicent Garrett Fawcett , nangona uAnderson waba ilungu leKomidi Ephambili yoMbutho kaZwelonke weNkxwaleko yabasetyhini ngo-1889. Emva kokufa komyeni wakhe ngo-1907, waqala ukusebenza.
U-Elizabeth Garrett Anderson ukhethwe ngumphathi-dolophu wase-Aldeburgh ngo-1908. Wanikeza iintetho zokubhokoxa, ngaphambi kokunyuka kwamanyathelo okuqhubela phambili ekuhambeni kwakhe. Intombi yakhe uLouisa - naye ugqirha-wayesebenzela ngakumbi kwaye unamandla ngakumbi, uchitha ixesha entolongweni ngo-1912 ngenxa yemisebenzi yakhe.
Isibhedlele esitsha saqanjwa ngokuthi yi-Elizabeth Garrett Anderson Hospital ngo-1918 emva kokufa kwakhe ngo-1917. Ngoku iyingxenye yeYunivesithi yaseLondon.
Imfazwe Yehlabathi II: I-Air Vice Marshal Johnnie Johnson
12 Abaphawulekayo abafazi baseVirginia
UMary Lacey Sr. kunye noMary Lacey Jr.
Imfazwe ka-1812: jikelele uWilliam Henry Henry Harrison
Quote Mary McLeod Bethune
Quotes Margaret Mead
Quotes Elizabeth Cady Stanton
I-Admissions yeYunivesithi yaseHollins
I-Air Force Academy Admissions
Imfazwe Yehlabathi 1: Ixesha elifutshane eliphambi kwe-1914
Ukusebenzisa izitho zezilwanyana kwiimfundiso zamaPagan kunye neWiccan
Iingoma ezili-10 eziphezulu zika-1993
Indlela Yokuguqula Iphepha Lomsebenzi kwi-Action Activity
Ngaba Kukulungele Ukuthandaza, "Ukuba KuyiNtando Yakho, Nkosi?"
Phezulu Stevie Wonder Ingoma zee-80s
I-College Institute of Art Admissions
Ukubhiyozela Usuku Lokubonga
Yiyiphi Incoko, iContactitive, ne-Inverse?
Ukuqonda Ukuboniswa kokusetyenziswa kwe-Fuel Instant
Ukuguquka kweCuban: Ukuhamba kweGranma
I-Venus Pisces Woman
Iyintoni iNdlo enkulu kunazo zonke kwihlabathi?
Indlela yokusebenzisa iNgqungquthela yesiFrentshi yesiNgesi 'Ah Bon'
Iqhosha leNqila yaseNtaliyane
Leach kunye neLeech
Ukwahlukana Phakathi 'kobuthathaka' kunye 'nesenzi esinamandla'
ILizwi le-Day - atarashii